Madaxweynaha dawladda Puntland Cabdiwali M. Cali Gaas oo Gaalkacyo kula kulmay nabadoonnada gobolka Mudug. – Radio Daljir
Agoosto 18, 2015 8:31 b 0
Gaalkaco, 18, August 2015 – Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa xarunta Madaxtooyada magaalada Gaalkacyo kula kulmay Nabadoonada Gobalka Mudug.
Kullanka oo ay kasoo qeyb-galeen Nabadoonada Gobalka Mudug ayaa waxaa looga hadlay mudadii uu socday xoojinta wadashaqeynta Dawladda iyo Nabadoonada , Iyo nidaamka ugu habboon oo la isaga kaashan karro Nabadgelyada Gobalka, wadashaqayn dhexmarta hay\_’adaha ammaanka iyo shacabka , xoojinta midnimada iyo wadajirka , dib u habeynta bilicda magaalada iyo Bixinta canshuuraha.
Nabadoonada Gobalka Mudug ayaa waxaa ay madaxweynaha ka codsadeen in wakhti kordhin uu u sameeyo Dadweynaha looga baaqay inay ka baxaan dhulka Dawladda ee ku yaala magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo loo qabtay saddex maalmood .
Madaxweyne Gaas ayaa dhankiisa Nabadoona codsiga ay u jeediyeen uga jawaabay in wakhti uu u kordhinayo oo keliya dadka ay ku adag tahay in si fudud uga guuraan , islamarkaana ay u taalo alaab badan hanoqoto adeeg ganacsi iyo wixii lamid ah, balse dadka kale ayuu ugu baaqay in ay wakhtigii loo qabtay uga guuraan si hantidaasi gacanta Dawladda ugu soo noqoto.
Beesha caalamka oo soo dhowaysay doorashadii Axmed Madoobe